Andrade dia naneho hevitra tamin'i Charlotte Flair nolazaina taminy fa toa lehilahy izy - Wwe
Tsy ela dia tsy nahita an'i Andrade tao amin'ny fahitalavitra WWE ireo mpankafy, fa ilay Tompondakan'ny NXT teo aloha kosa dia nanohy naneho ny fisiany tamin'ny media sosialy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia naneho hevitra i Andrade tamin'ny bitsiky ny fofombadiny. Charlotte Flair dia niditra tao amin'ny Twitter mba hanambara ny valiny mety amin'ny olona iray izay nilaza fa toa lehilahy izy.
Ity no navoakan'i Charlotte Flair:
Nisy bandy nilaza tamiko fa lehilahy aho. Nolazaiko azy fa raha nanainga toa ahy izy dia afaka nanao koa.
- Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 18 Febroary 2021
Andrade tezitra be no naneho hevitra tamin'ilay bitsika tamin'ireto manaraka ireto:
iza no mampiaraka cole sprouse
Iza no nilaza taminao !!! 🤬 https://t.co/8wwWViErXX
- THE IDOL ANDRADE (@AndradeCienWWE) 18 Febroary 2021
Ny satan'i Andrade WWE dia noresahana lava nandritra ny herinandro vitsivitsy. Ny tatitra farany avy amin'ny Dave Meltzer nanambara fa tsy mahita na inona na inona ao Andrade i Vince McMahon. Ny superspanika Hispanika dia iray tamin'ireo tovolahy Paul Heyman fony ilay veterana dia Tale Mpanatanteraka RAW. Na izany aza, tsy nahazo sitraka i Andrade, ary voalaza fa tsy mikasa ny hanery azy i Vince McMahon.
Tsy mahita na inona na inona ao amin'i Aleister Black, na i Andrade, na amin'ireo tovolahy ireo i Vince izay very tamin'ny toerany i Heyman, ary nolazaiko ireo ry zalahy fa f ** ked.
WrestleVotes dia nitatitra tamin'ny Desambra 2020 fa ny tompon'andraikitra WWE dia niresaka ny hevitra momba ny fananana mpivady an-tserasera Charlotte Flair sy Andrade.
Ny hevitra efa noresahina na izany aza tsy voafaritra amin'izao fotoana izao dia ny fiarahana miasa amin'ny sarimihetsika Charlotte & Andrade rehefa miverina amin'ny fahitalavitra izy ireo. Ny hevitra ao ambadik'izany dia ny fampiasana ny herin'ny kintana an'i Charlotte hanandratra an'i Andrade ho eo amin'ny sehatry ny hetsika lehibe.
- WrestleVotes (@WrestleVotes) 7 Desambra 2020
Andrade aza dia naneso ny mety hiverenana any amin'ny NXT hanenjika ny anaram-boninahitra notananany tamin'ny marika Black-and-Gold. Araka ny efa noeritreretinao azy dia nanjary feno fisalasalana ny salan'asan'i Andrade WWE.
Raha ny momba an'i Charlotte Flair, ny Mpanjakavavin'i WWE dia tao amin'ny vaovao tato ho ato, ary azo antoka izany. Charlotte dia eo afovoan'ny tantara miteraka resabe miaraka amin'ny rainy Ric Flair sy Lacey Evans.
Ny zoro RAW dia manohy mitazona ny lohateny rehetra satria nanambara i Lacey Evans fa bevohoka nandritra ny fizarana farany RAW. Araka ny voalaza tetsy aloha, dia bevohoka ara-dalàna ny The Sassy Southern Belle. Mahaliana ny mahita ny fivoaran'ny tantaran'ny Flairs rehefa mitodika mankany amin'ny WrestleMania 37 isika.
Tokony hanantena ny hahita an'i Andrade miverina amin'ny fahitalavitra WWE eny an-dàlana mankany 'Mania, mety ho mpiara-miasa amin'i Charlotte Flair an-tsary ve isika? Ampahafantaro anay ny hevitrao ry zalahy ao amin'ny faritra maneho hevitra.
inona avy no famantarana fa ny ankizivavy tia anao
rehefa tena tianao ny bandy
iza no filohan'ny filoham-pirenenan'i phil lester
amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana dikany
ahoana ny fomba tokan-tena rehefa avy nifandray ela tamin'ny bandy